Vakawanda vedu takambova muupenyu hwangu pamwechete zvakadai chirwere intestinal kufanana salmonella. Fever, abdominal marwadzo, kurutsa, kakawanda nzendo kuchimbuzi - ndizvo zvinoitika kana Salmonella iri anwa. Ngationgororei muudzame kworudzii zvokurwara nyaya pazviri unomuka, zvinotora muchimiro salmonellosis. The incubation nguva muzvidzivirire chirwere zvicharehwawo akafukidza munyaya zvinhu.
Salmonellosis - intestinal zvirwere dzinoratidzwa kunosiyana inosiyana kudhaka pamusoro muviri uye lesion yacho ura. Zvokurwara kumutsa kunyanya mabhakitiriya Salmonella kuti vanopinda muviri munzira dzakawanda mhando:
kubva mhuka anorwara,
kubva munhu ane HIV (izvo pacharo ari kurwara, kana kuri mutakuri utachiona).
The incubation nguva kuti salmonellosis Avharenji usiku. chirwere ichi intestinal rakanyatsojeka achinyengera, nekuti pakutanga haagoni kutaura vakanatswa, uye murume, achitarisira kuti kunokurumidza kupora, asingadi kuteerera kurapwa kwake.
Munyoro chimiro salmonellosis rinowanika haawanzotauri kuoneka zvakawanda zvive, zvishomanana kukanganisika chair. Zvisinei, pane zvakawanda kwazvo zviitiko chirwere, izvo pachena fivha, unzenza zvituru, akadzokorora kurutsa, zvakakomba abdominal marwadzo, nomusoro.
Zvinoitika kuti basa muvanhu Salmonella anogona kukonzera kufenda, kugwinha, kwenguva refu fivha, kutungamirira kune kuwedzera zvomukati - the chirwatata, chiropa - nokuita mairi septic foci.
Microbes genus Salmonella
Salmonella - a genus mabhakitiriya kuti tsvimbo serin'i, kusvika 7 M yakafara uye 0,7 m. The zvigare zviri pathogenic vanhu nemhuka vararame, sezvo mutemo, muna dumbu. Vane vane mwero kwazvo, kutanga uye kukura mune zvokutanga inotonhorera nevezvenhau.
Kusvika muna womunhu, utachiona vanotanga kuva vanoshingaira, asi kwete pakarepo. The incubation nguva kuti salmonellosis nedzevakuru anoda kubva maawa 6 mazuva matatu.
Mabhakitiriya zvakakwana vakachengetedzwa muna zvekunze ezvinhu:
mu ivhu - kusvika makore rimwe nehafu,
mvura - kusvika 5 months.
Well vanofunga pachavo uye salmonella zvokudya. vane simba ravo:
mu chizi - kusvika 1 gore,
-oma nyama - inenge 6 months,
ruomba - kusvika 4 months,
nyama zvigadzirwa - kubva 2 kusvika 4 months
yogati uye doro - kusvika 2 months
mukaka - kusvika mazuva 20.
Salmonella ari kunokuvadza ultraviolet chiedza nokudziya: kana nenharo kuti tembiricha kuti 55 ° C utachiona vari kuurayiwa maawa 1.5 kuti tembiricha 60 ° C - kwemaminitsi 12. Zvisinei, Salmonella haritauri kuurayiwa kuoma nechando zvachose.
Mune dzimwe zvigadzirwa, dzakadai mukaka kana nyama, salmonella harisi chete vakachengetedzwa, asiwo kuwanda.
Sei pane salmonellosis?
Vakawanda nzira chirwere kwevanhu Salmonella - utachiona zvigadzirwa. Zvinokosha kucherechedza kuti Salmonella mupenyu zvokudya madhaka haachinji rwayo uye kuravira. Chirwere mishonga mhuka (mazai, nyama) rinowanika nezvikonzero zvakasiyana siyana:
kana isina kukodzera kana dzinovhurika uuraye mhuka;
zvaipesana nemitemo okuchengetera zvinhu uye kugadzirira zvokudya (semuenzaniso, pamusoro kuonana ose apera zvinhu uye mbishi nyama);
pamwe simba kupisa zvakaipa zvigadzirwa (steaks neropa uye zvichingodaro.);
kuburikidza mazai shiri vanorwara, kunyanya mazai Dhadha.
Chinonyanya yakanaka zvakatipoteredza nezvebasa mabhakitiriya ndiwo chikafu mura uye gel-kufanana kwemashoko - aspic, mumakenduru, salads. It anova kushandiswa kunyanya ngozi munguva inodziya mwedzi zvigadzirwa izvi: maererano nenhamba, muzhizha, richipisa, kuitika salmonellosis kunowedzera zvawanda.
Pane zvakawanda siyana zvokurwara:
Ichi chimiro chirwere ndicho. The incubation nguva kuti salmonellosis, zviratidzo izvo kuitika nokukurumidza uye wakajeka zvikuru - imwe nguva apo vanhu kare vakabatwa, asi zviratidzo chirwere asi. Chokutanga, pane simba uye musoro, dzungu, nefivha, chills.
Next, pane zviratidzo yokutanga zvomudumbu turakiti - dumbu kurwadziwa guvhu; Kurutsa pamwe zvinooneka vakasara chikafu, uye gare gare - pamwe bile; Manyoka pamwe greenish mutsvina yadzo uye madzihwa. Panewo zviratidzo uye ziso kuratidzirwa salmonellosis: parurimi murwere sokuti chena firimu, pane kuoma muromo, bloating, marwadzo kuti inoitika palpation.
Manyoka pamwe gastrointestinal salmonellosis fomu kwapedza mazuva anoverengeka uye kazhinji ane nemigumisiro: kupera mvura mumuviri kunoitika pamwe kurasikirwa chicherwa munyu, murwere anogona kuderera BP, uye kugwinha kuoneka, dzimwe nguva rinobaya tsinga - kune syncope uye dzungu. With nenguva mabatiro murwere zvinova nyore pazuva rechishanu, asi pakupora yakazara kazhinji inoitika kurutivi kuguma vhiki wechipiri.
Tifopodobnaya uye septic siyana
More zvakakomba kunotoda remifananidzo tifopodobnaya uye septic siyana salmonellosis.
Very rakafanana zviratidzo zvechirwere gastrointestinal-mhando zvokurwara ndiyo tifopodobnaya chirwere. salmonellosis kwakadaro (incubation nguva murume vanonziwo Isimba rakadini rinogona kubudiswa kana chakavigwa) pakutanga vanoitwa kuzivikanwa muutera uye yakakwirira muviri tembiricha. Uyezve, hunhu hosha anova akafanana fivha, munhu ane refu-refu (mukati pavhiki), nefivhiri, dzungu uye pazvinobvira zvisipo. On murwere dumbu mapundu, mutauro inova vachena mashava ruvara, ganda rava rakachenuruka chaizvo, abdominal distension yekudyidzana. Complete kuzoita murwere chimiro iyi salmonella kunoitika haana kwokutanga pane pashure 1-1.5 pemwedzi rainyatsoigona kurapa.
Septic chimiro chirwere pachena pacharo chaizvo kashoma. Zvikurukuru Zviratidzo chirwere munogona vanhu vane simba zvirwere, vachangozvarwa uye vakwegura. The chirwere achabatsirwa kwenguva refu fivha, kunonyengedza vangadikitira, jaundice, anogumbura pezvakaitwa pakugadzirwa zvomukati. Kwakadaro mararamiro chirwere kazhinji terminates murufu.
Asymptomatic chimiro uye bacteriocarrier
Asymptomatic vanoonekwa muchimiro salmonellosis, umo vanhu muviri awana shoma utachiona uye zvirwere kurarama hwavo nezvavatorwa tusingaoneki.
Bacteriocarrier akadana ezvinhu umo munhu haasi kurwara, asi salmonella mune faeces kwenguva yakareba (kazhinji hapana kupfuura mitatu).
Chii chinoitika mumuviri?
Salmonellosis hunovapo mukati mazuva matatu kubva nguva kupinda mabhakitiriya ari mumuviri womunhu. The Maawa 6-8 chirwere rokutanga hakuiti unooneka.
Salmonella, achipinda dumbu zvokudya, akasangana munzira wokutanga dzinongoitika nezvipingamupinyi - ane acidic ezvinhu, nemhaka iyo bacteria zvakaoma kufamba mberi. Zvisinei, kana muviri zvirwere kukwana Salmonella anopinda diki ura. Part kwemabhakitiriya vanourawa, sezvamakaropafadzwa endotoxin asunungurwa. Panguva iyi, munhu ane mangwanani zviratidzo zviri chirwere.
Mabhakitiriya avo vasina kuurayiwa, kugara ari ura duku uye kurwisa rusvingo rwaro, nokudaro nevamwe kuti toxin. Water kurasikirwa kunoitika kuburikidza ura, kunokanganisa tsinga, havachanyatsogoni vascular matauriro. Salmonella zvishoma nezvishoma asunungurwa kupinda muropa hwaishandiswa dzakapararira muviri uye kupinda mumba itsvo, mapapu, node nodes, chirwatata, apo vari rakachengetedzwa.
In Kana apo kutapata ndiye simba, danho rinotevera anourawa Salmonella, zvimwe pane inotungamirwa manyoro anogumbura maronda - anobata budiriro fivha kana septic fomu zvokurwara.
Zvinozivikanwa kuti zvine ngozi kuti vana salmonellosis. The incubation nguva nevana zvakafanana mune vakuru, asi kakawanda chirwere kwakaoma zvikuru uye kwakaoma zvikuru kurapwa. Sezvo vana vanokura rikawira simba rokuzvidzivirira uye susceptibility kuna Salmonella ipfupi chaizvo.
Chirwere pakati Salmonella kunotanga kwokunze kuzviongorora murwere. Doctor unocherekedza zviratidzo zvingaratidza kuvapo kwezvirwere muvanhu, inorondedzera mukuru ezvinhu utano, anogadza bacteriological Analyses uye serology. Sezvo zvinhu kushandiswa gastric mvura yaunganidzwa Washing nzira kwete chete ropa uye weti, asiwo vomitus, mutsvina yadzo, bile,.
chirwere kwakakodzera salmonellosis ndiko kusimba kukosha, sezvo mukupera mharuro kurapwa haapi vanhu kunaya zvakakwana, uye pathological mamiriro zvinowanzoda kwazvo chimiro uye kutungamirira kukudziri- kuzvimba mudumbu (peritonitis), majoini (polyarthritis) kana kukonzera muchetura kuvhunduka.
Kuti mushonga inofanira kushandiswa pakarepo rekukwazisa rokutanga vakafunga salmonellosis (incubation nguva). Pakurapa chirwere kazhinji kunoitika sezvo outpatients. Muchipatara mu salmonellosis iri tingasarudza. Zvisinei, chipatara anoratidzwa vana, vakwegura, vashandi yaigadzira zvokudya, uyewo kwazvo chimiro chirwere.
salmonellosis kurapwa muitiro wakaoma kunzwisisa kuti anosanganisa dzakawanda dzine:
antibacterial kurapa nokuti Salmonella kudzora;
rehydration zvingaitwa ne kushandiswa kudzorera bhuku Urume akarasika ne manyoka uye kurutsa;
medicated gadziriro zvakazorodza kudhaka kwacho;
kudzoreredzwa microflora ari muura;
kuomerera chaiwo kudya vari kudya;
Mukurwisa utachiona kushandisa zvinodhaka zvinobva kuti penicillin uye fluoroquinolones. Nokuti Salmonella nhaka kukwanisa kukurumidza vajaire nemishonga, kushandisa zvimwe zvinodhaka zvakadai tetracyclines uye aminoglycosides kazhinji zvishoma. Pane mutemo maererano izvo nemishonga vasina raitongwa panguva munyoro chimiro chirwere, uyewo kana pasina ropa pachituru.
Kubvisa migumisiro kudhaka kushandisa chelators akadai kusashanda kabhoni, "Enterosgel," "Polisorb". antispasmodics kubatsira kubvisa marwadzo syndrome ( "No-Spa").
Kana makore murwere pedyo vakwegura, uyewo kana nhoroondo chirwere zvirwere kuuya dumbu kana ura, zvavakabvumirana yaunodya kuti enzayemu kugadzirira akadai "Pancreatin" kana "wokupembera".
Zvikuru ndiko kudzorerwa vakarasika bhuku mumuviri Urume. Kuwedzera kudiridza anobatsira kushandisa nokuzvinwira muchero, zvinwiwa muchero, simba tii.
Pachiimbwa zvinodhaka kurapa inowanzoshandiswa Quick emishonga zvetsika. Mumazuva hosha mumiririri mangwanani unoshandiswa ine tannins, - Garnet mashava, mhuka Cherry michero, womuouki omuti. Gare gare kune pamusoro aunogona kuwedzera kugamuchira Anti-anogumbura miriwo - calendula, chamomil, mhuka mastrawberry, somuzivi.
Diet nokuti salmonellosis
Zvikuru pakurapa salmonellosis ndiko kudya. Mumazuva hosha mangwanani risingabatanidzwi zvokudya mukaka nezvinogadzirwa nomukaka.
The murwere contraindicated chikafu iyo rine imwe kunovhiringidza zvainoita nemudumbu: zvigadzirwa, zvine zvinonyadzisa fibers, faibha; zvokudya zvomumagaba; mufushwa; Spicy uye zvakakangwa zvokudya. chiyero ichi yaifanira kwete chete panguva kurapwa, asi mwedzi pashure kupora.
Kunze zvigadzirwa anotokonya kwemasayendisiti kuvira uye putrefaction ari ura. Izvi zvinosanganisira muriwo, michero, kutsanya carbs - muffinit, zvakabikwa zvinhu.
Neimwe nzira, murwere inokurudzirwa kushandisa defatted soups (semuenzaniso, pureed muriwo), nyama steamed kana hove dzakaonda; mazai yakabikwa munyoro-kana omelet; yakabikwa nemvura, pane bota mukaka, Curd, metered - ruomba; tika; mondo; compote nemichero yakaomeswa, tii.
Kana uchiyamwisa haisi varumbidzwa kumisa mucheche chirwere.
Kudzivirira salmonellosis auya nokucherechedza nyore mitemo anozivikanwa vose:
Unogona kudya nyama kuti asina vakapfuura kudzora utano mabasa akakodzera.
The nyama inofanira pasi kudziyisa kurapwa kwemaawa dzinenge mbiri kana kugadzirira chimwe chidimbu guru.
Havagoni kuparadzwa mbishi Dhadha mazai - varege yakabikwa kweinenge kota paawa.
Usati waita chinhu omelet, mazai zvinofanira kusukwa. Pashure zvitinakire zai goko maoko dzinofanira kucheneswa kwazvo.
The kicheni anofanira zviviri nokuveza mapuranga - imwe nyama, wechipiri - nokuti zororo.
Regai kuchengetera mufiriji, mbishi nyama munharaunda zvimwe zvigadzirwa.
Nokuti kunwa uye kugeza muchero chete pavanoshandisa (kana yakabikwa) mvura inogona kushandiswa.
Kushambira ari inodziya mwaka chete zvinofanira kubvumirwa mumunda ichi, nekuti zvinokwanisika kuva utachiwana salmonella, mumwe sveta mvura dura apo kushambira.
Vana vari pangozi, nekuti runodzivirira ehupfumi muviri wemwana ndiwo simba kupfuura kuti zera. Basa vabereki - kudzidzisa mwana wako yakarurama pakurapa mhuka neshiri.
Saka, zvinokwanisika here muchidimbu zvose pamusoro. Munyaya ino isu akaongorora huru panyaya salmonella - intestinal chirwere yakakonzerwa utachiona, salmonella.
Sezvo causative nomumiririri hosha anwa zvokudya, uye kubva munhu ane HIV kana mhuka, zvinofanira kuongororwa kunyatsoomerera nechokwadi kuti isu kudya uye sei tinozvibata munharaunda uye dzinovaraidza.
Zvinhu zvinova pachena kuti mushonga anoziva dzakawanda kutorwa salmonella. The incubation nguva, zvinokonzera chirwere mune vakuru nevana zvakafanana, asi zviomere vana vanotambura salmonellosis. Izvi nokuda peculiarities vana zvirwere gadziriro.
By pakurapa chirwere inofanira kushandiswa pakarepo. Zvipatara salmonellosis - multicomponent zvainanga kusunga basa sezvo kwemabhakitiriya mumuviri, uye kudzorerwa utano pashure kupera mvura mumuviri uye zvinetso zviri intestinal microflora nokuda manyoka, kurutsa, fivha.
Dislocation norutsoka - Zviratidzo, Treatment
How kurapa psoriasis, kana zvose unofanira kuziva chirwere
Low muviri tembiricha. Zvokuita?
Scarlet nefivhiri nedzevakuru vanogona kutora mazhinji siyana
Abdominal heniya: Zviratidzo dzavo uye kurapwa
The kwokuomerwa rezasi dumbu
"Ini farmlyu" - zvinorevei? nokukurumidza uye zvakarurama sei kuti vanoirima?
How kupikisa faindi rwemotokari kubva kamera? Where kuenda nokuda dambudziko rake?
Isotopes - zviri siyana zvine maatomu akafanana pamusoro Zvinoumba musimboti
Pakurwisa mahwindimiri. ungwaru gamba
The yakanakisisa kutandara Kirov: review, rating, nzvimbo, wongororo
Ndinofanira kutenga imwe iPad? Zvayakanakira nezvayakaipira of piritsi
Ontology - dzidziso kwouzivi avo aripo
Kana mwana ane mazino chekawo ... Temperature - chikonzero kuona chiremba
Lip balms "Nivea": wongororo
A nyaya kuravidza: kugadzirira Lenten Pancakes
Sei anyore rondedzero pamusoro muuzivi?
The mwana hyperopia. Zvinokonzera neMarapirwo